Taom-baovao : fomba ny manolotra vakodrazana | NewsMada
Taom-baovao : fomba ny manolotra vakodrazana
Mihavitsy, saingy mbola misy ireo tarika mpanao vakodrazana manolotra fampisehoana ankalamanjana ho fiaraha-mifaly amin’izao taona vaovao izao. Amin’ny ankapobeny, eny an-tsena eny no ahitana azy ireny. Mpianakavy na mpiray tanàna, avy any ambanivohitra any, kosa ny ankamaroan’izy ireny.
Any ambanivohitra any, hatramin’izay, no ahitana andiany mpitendry zavamaneno, mpanao vakodrazana mitety tanàna, rehefa fety, indrindra ny taom-baovao. Tao anatin’ny taona maromaro izay, mitety ireo tsena sy toerana be mponina eto an-dRenivohitra izy ireo. Tsy mijanona amin’ny hoe fizarana fifaliana sy fiaraha-mientana amin’ny fahatrarana ny taona vaovao no tanjona fa eo koa ny fitadiavam-bola.
Tsy voafetra fa izay foin’ny mpandalo no mba andrandrain’ireo mpanao vakodrazana, izay ahitana ankizikely, indraindray. Tsy miala amin’ny mahazatra ny zavamaneno entin’izy ireo, toy ny amponga sy ny sodina ary ny langoraona. Manaraka ny toetr’andro sy ny fironana ankafizin’ny olona kosa ny mozika lalaovina amin’ny gadona vakodrazana.
Azo lazaina ho harena mampiavaka ny Malagasy, indrindra ny aty afovoan-tany, eo amin’ny lafiny kolontsaina sy ny fomba amam-panao ireny fampisehoana vakodrazana amin’ny fiandohan’ny taona vaovao ireny.